အူနိုငျး အမျမရီ ရဲ့ ထိုငျခုံ အခွအေနကေ ဘယျလို ရှိနလေဲ? - SPORTS MYANMAR
အူနိုငျး အမျမရီ ရဲ့ ထိုငျခုံ အခွအေနကေ ဘယျလို ရှိနလေဲ?
By Edi Tor October 28, 2019
မနညေ့က ပဲလအေ့သငျးကို အိမျကှငျးမှာ2ဂိုး အသာနဲ့ အစောကွီး ဦးဆောငျခဲ့သညျ့တိုငျအောငျ ပှဲအပွီးမှာတော့ သရေ ရလာဒျသာ ထှကျပျေါသှားခဲ့ပွီး နောကျပိုငျး ၊ အာဆငျနယျ ပရိသတျတှေ ရဲ့ နညျးပွ အူနိုငျး အမျမရီ အပျေါထားရှိတဲ့ သဘောထားဟာ ပွတျသားသထကျ ပွတျသားလာခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။
အာဆငျဝငျးဂါး ခတျေအလှနျ ၊ ဖှဲ့စညျးပုံ အသဈ နဲ့ အတူ အသငျးအတှကျ မှနျကနျတဲ့ လမျးကွောငျး တဈခုအပျေါကို ပွနျလညျ တညျ့မတျနိုငျလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ခကျြ နဲ့ အမျမရီ ကို ခနျ့အပျခဲ့ပမေယျ့ ၊ အခု 17 လ အကွာမှာတော့ အနအေထားတှဟော တိုးတကျလာခွငျး မရှိတဲ့ အပွငျ ၊ ကစားသမား အငျအားဖွညျ့တငျးမှုတှေ စံခြိနျတငျ လုပျဆောငျခဲ့သညျ့တိုငျအောငျ ၊ ရလာဒျတှကေ တညျငွိမျခဲ့ခွငျး မရှိတာပါ။
တကယျတော့ အူနိုငျး အမျမရီ ကို ခနျ့အပျနိုငျဖို့ အတှကျ ဆုံးဖွတျခကျြ ခမြှတျခဲ့တာဟာ ခရှနျကီ အပါအဝငျ ၊ ဆနျလီဟီ ၊ ဗီနိုငျး တို့ကပါ အပွညျ့အ၀ သဘောတူခဲ့တာ ဖွဈပွီး ၊ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ မြားစှာ ထားရှိခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။
အာဆငျဝငျးဂါ ရဲ့ နရောကို ဆကျခံဖို့ အတှကျ လြာထားတဲ့ နညျးပွ စာရငျးကတျောတျောလေးကို မြားခဲ့သလို ၊ နာမညျကွီး နညျးပွပေါငျး 8 ယောကျ အထိ ချေါယူ အငျတာဗြူးခဲ့တာပါ။ အဲဒီ အထဲမှာ အလီဂရီ ၊ အာတီတာ ၊ အှနျနရီ ၊ လိုပကျတီဂူ ၊ ရနျနဈ ၊ ဆမျပါအိုလီ ၊ ဗီအဲရာ တို့ ပါဝငျခဲ့သလို ၊ ကှနျတီ ၊ အကျဒီဟောငျး ၊ ဆာရီ ၊ ရျောဂြာ တို့ကိုလဲ ဆကျသှယျမှုတှေ ရှိခဲ့ပါသေးတယျ။
သို့သျော နောကျဆုံး ဆနျကာတငျ စာရငျးမှာ ကနျြခဲ့တာတော့ အာတီတာ နဲ့ အမျမရီ တို့နှဈဦး ဖွဈပွီး ၊ အမျမရီဟာ အသငျ့တျောဆုံး ဖွဈမယျ ဆိုတဲ့ ရှေးခယျြမှု နဲ့ ခနျ့အပျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ပဲလေ့ ကို သရကေပြွီး နောကျပိုငျး Rumor သတငျးတှမှောတော့ အမျမရီဟာ ရာထူးကနေ ထုတျပယျခံရဖို့ နီးစပျနပွေီ ဖွဈတယျလို့ ဖျောပွနပေမေယျ့ ၊ အာဆငျနယျ ရာထူးကွီး အပိုငျးကတော့ ထောကျခံမှု ပေးထားဆဲ ဖွဈပါတယျ။
ထုံးစံအတိုငျး မနညေ့က ပှဲအပွီးမှာလဲ ဆနျလီဟီ ၊ အားကစား ဒါရိုတျတာ အဒူး တို့ဟာ အာဆငျနယျ အသငျးရဲ့ အဝတျလဲခနျး အတှငျးကို ဝငျရောကျ ခဲ့ပွီး ၊ ကစားသမားတှေ အပါအဝငျ အသငျးရဲ့ ဝနျထမျးတှေ နဲ့ တှဆေုံ့ စကားပွောခဲ့ပါသေးတယျ။ သတငျးသမားတှေ ရဲ့ အဆိုအရတော့ အဲဒီလို ပွောဆိုခဲ့စဉျ အမျမရီ ရဲ့ အနာဂတျ နဲ့ ပတျသကျတဲ့ အကွောငျးအရာက တဈခှနျးမှ မပါခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ပှဲအပွီး ကစားသမား အခြို့ ဒေါသ ထှကျခဲ့ကွတာလဲ နညျးပွ ရဲ့ နညျးစနဈပိုငျး ဆိုငျရာကွောငျ့ မဟုတျပဲ ၊ VAR ရဲ့ လုပျဆောငျပုံကို မကနြေပျလို့သာ ဖွဈပွီး ၊ ဒီကနမှေ့ာ တှဆေုံ့မယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျ အားကစား ဒါရိုတျတာမြား အစညျးအဝေးမှာ ပွိုငျပှဲ တာဝနျရှိသူတှေ ထံ တရားဝငျ တငျပွသှားဖှယျ ရှိနပေါတယျ။
အမျမရီ အနနေဲ့တော့ လကျရှိ အနအေထားထကျ ပိုကောငျးတဲ့ ရလာဒျတှေ ထှကျပျေါလာဖို့ လိုအပျနပွေီ ဖွဈသလို ၊ သူ့ရဲ့ အနာဂတျ နဲ့ ပတျသကျပွီးလဲ ရာသီအကုနျထိ စောငျ့ကွညျ့ သုံးသပျခံရသှားဖှယျ ရှိနပေါတယျ။ ဒီရာသီ ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျ ပျေါကို မူတညျက လကျကနျြ အလိုအလြှောကျ သကျတမျးတိုးခှငျ့ တဈနှဈ ကို သကျဝငျစမှော ဖွဈပွီး ၊ အကယျ၍ ခနျြပီယံလိဂျ ဝငျခှငျ့ ရအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျခွငျး မရှိပါက အသငျးနဲ့ လမျးခှဲရဖှယျ ရှိနပေါတယျ။
အသငျးရဲ့ ကစားသမားတှေ ထဲမှာလဲ အားလုံးက အမျမရီကို ထောကျခံထားခွငျး မရှိသညျ့ တိုငျအောငျ ၊ အမြားစုက အမျမရီ အပျေါ ယုံကွညျထားကွဆဲမို့ ၊ စပိနျသားကွီး အနနေဲ့ ရလာဒျတှေ ကောငျးအောငျ ပွနျလညျ ကွိုးစားမယျ ဆိုပါက အခှငျ့အရေးက ရှိနဆေဲပါ။
အကယျ၍ အာဆငျနယျ ဟာ အမျမရီ နဲ့ လမျးခှဲဖို့ အနအေထားအထိ ရောကျရှိလာတယျ ဆိုရငျတောငျ ၊ လကျရှိ အခြိနျထိတော့ ဘယျလို အစီအစဉျမြိုးမှ တိတိကကြ ရေးဆှဲထားခွငျး မရှိသေးဘူးလို့ ကလပျ နဲ့ နီးစပျတဲ့ သတငျးတှေ အရ သိရသလို ၊ လကျထောကျ နညျးပွ ယှနျးဘတျ က ယာယီ နညျးပွ ဖွဈလာနိုငျခတြှေလေဲ ပိုမြားနပေါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဘာတှေ ဆကျဖွဈလာမလဲ ဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ကွတာပေါ့
အူနိုင်း အမ်မရီ ရဲ့ ထိုင်ခုံ အခြေအနေက ဘယ်လို ရှိနေလဲ?
မနေ့ညက ပဲလေ့အသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ2ဂိုး အသာနဲ့ အစောကြီး ဦးဆောင်ခဲ့သည့်တိုင်အောင် ပွဲအပြီးမှာတော့ သရေ ရလာဒ်သာ ထွက်ပေါ်သွားခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ၊ အာဆင်နယ် ပရိသတ်တွေ ရဲ့ နည်းပြ အူနိုင်း အမ်မရီ အပေါ်ထားရှိတဲ့ သဘောထားဟာ ပြတ်သားသထက် ပြတ်သားလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဆင်ဝင်းဂါး ခေတ်အလွန် ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အသစ် နဲ့ အတူ အသင်းအတွက် မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်း တစ်ခုအပေါ်ကို ပြန်လည် တည့်မတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ချက် နဲ့ အမ်မရီ ကို ခန့်အပ်ခဲ့ပေမယ့် ၊ အခု 17 လ အကြာမှာတော့ အနေအထားတွေဟာ တိုးတက်လာခြင်း မရှိတဲ့ အပြင် ၊ ကစားသမား အင်အားဖြည့်တင်းမှုတွေ စံချိန်တင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်တိုင်အောင် ၊ ရလာဒ်တွေက တည်ငြိမ်ခဲ့ခြင်း မရှိတာပါ။
တကယ်တော့ အူနိုင်း အမ်မရီ ကို ခန့်အပ်နိုင်ဖို့ အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခဲ့တာဟာ ခရွန်ကီ အပါအဝင် ၊ ဆန်လီဟီ ၊ ဗီနိုင်း တို့ကပါ အပြည့်အ၀ သဘောတူခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ များစွာ ထားရှိခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဆင်ဝင်းဂါ ရဲ့ နေရာကို ဆက်ခံဖို့ အတွက် လျာထားတဲ့ နည်းပြ စာရင်းကတော်တော်လေးကို များခဲ့သလို ၊ နာမည်ကြီး နည်းပြပေါင်း 8 ယောက် အထိ ခေါ်ယူ အင်တာဗျူးခဲ့တာပါ။ အဲဒီ အထဲမှာ အလီဂရီ ၊ အာတီတာ ၊ အွန်နရီ ၊ လိုပက်တီဂူ ၊ ရန်နစ် ၊ ဆမ်ပါအိုလီ ၊ ဗီအဲရာ တို့ ပါဝင်ခဲ့သလို ၊ ကွန်တီ ၊ အက်ဒီဟောင်း ၊ ဆာရီ ၊ ရော်ဂျာ တို့ကိုလဲ ဆက်သွယ်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။
သို့သော် နောက်ဆုံး ဆန်ကာတင် စာရင်းမှာ ကျန်ခဲ့တာတော့ အာတီတာ နဲ့ အမ်မရီ တို့နှစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ၊ အမ်မရီဟာ အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်မယ် ဆိုတဲ့ ရွေးချယ်မှု နဲ့ ခန့်အပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပဲလေ့ ကို သရေကျပြီး နောက်ပိုင်း Rumor သတင်းတွေမှာတော့ အမ်မရီဟာ ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ခံရဖို့ နီးစပ်နေပြီ ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြနေပေမယ့် ၊ အာဆင်နယ် ရာထူးကြီး အပိုင်းကတော့ ထောက်ခံမှု ပေးထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း မနေ့ညက ပွဲအပြီးမှာလဲ ဆန်လီဟီ ၊ အားကစား ဒါရိုတ်တာ အဒူး တို့ဟာ အာဆင်နယ် အသင်းရဲ့ အဝတ်လဲခန်း အတွင်းကို ဝင်ရောက် ခဲ့ပြီး ၊ ကစားသမားတွေ အပါအဝင် အသင်းရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ နဲ့ တွေ့ဆုံ စကားပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ သတင်းသမားတွေ ရဲ့ အဆိုအရတော့ အဲဒီလို ပြောဆိုခဲ့စဉ် အမ်မရီ ရဲ့ အနာဂတ် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာက တစ်ခွန်းမှ မပါခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပွဲအပြီး ကစားသမား အချို့ ဒေါသ ထွက်ခဲ့ကြတာလဲ နည်းပြ ရဲ့ နည်းစနစ်ပိုင်း ဆိုင်ရာကြောင့် မဟုတ်ပဲ ၊ VAR ရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံကို မကျေနပ်လို့သာ ဖြစ်ပြီး ၊ ဒီကနေ့မှာ တွေ့ဆုံမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် အားကစား ဒါရိုတ်တာများ အစည်းအဝေးမှာ ပြိုင်ပွဲ တာဝန်ရှိသူတွေ ထံ တရားဝင် တင်ပြသွားဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
အမ်မရီ အနေနဲ့တော့ လက်ရှိ အနေအထားထက် ပိုကောင်းတဲ့ ရလာဒ်တွေ ထွက်ပေါ်လာဖို့ လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်သလို ၊ သူ့ရဲ့ အနာဂတ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီးလဲ ရာသီအကုန်ထိ စောင့်ကြည့် သုံးသပ်ခံရသွားဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ ဒီရာသီ ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ပေါ်ကို မူတည်က လက်ကျန် အလိုအလျှောက် သက်တမ်းတိုးခွင့် တစ်နှစ် ကို သက်ဝင်စေမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ အကယ်၍ ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့် ရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိပါက အသင်းနဲ့ လမ်းခွဲရဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
အသင်းရဲ့ ကစားသမားတွေ ထဲမှာလဲ အားလုံးက အမ်မရီကို ထောက်ခံထားခြင်း မရှိသည့် တိုင်အောင် ၊ အများစုက အမ်မရီ အပေါ် ယုံကြည်ထားကြဆဲမို့ ၊ စပိန်သားကြီး အနေနဲ့ ရလာဒ်တွေ ကောင်းအောင် ပြန်လည် ကြိုးစားမယ် ဆိုပါက အခွင့်အရေးက ရှိနေဆဲပါ။
အကယ်၍ အာဆင်နယ် ဟာ အမ်မရီ နဲ့ လမ်းခွဲဖို့ အနေအထားအထိ ရောက်ရှိလာတယ် ဆိုရင်တောင် ၊ လက်ရှိ အချိန်ထိတော့ ဘယ်လို အစီအစဉ်မျိုးမှ တိတိကျကျ ရေးဆွဲထားခြင်း မရှိသေးဘူးလို့ ကလပ် နဲ့ နီးစပ်တဲ့ သတင်းတွေ အရ သိရသလို ၊ လက်ထောက် နည်းပြ ယွန်းဘတ် က ယာယီ နည်းပြ ဖြစ်လာနိုင်ချေတွေလဲ ပိုများနေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့